ICORIAN VS QUARTZ COUNTERTOPS (ISIKHOKELO SOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi ICorian vs Quartz Countertops (Isikhokelo soYilo)
ICorian vs Quartz Countertops (Isikhokelo soYilo)
Nasi isikhokelo sethu ngokuthelekisa imiphezulu yeetafile zeCorian vs quartz kubandakanya i-pros kunye neengozi zayo malunga noyilo, ukuhlala ixesha elide, ukugcinwa kunye neendleko. Ukuba ukhangele izinto ezomeleleyo kodwa ezintle zokubala ezingayi kuqhekeza i-bhanki, kuya kufuneka ujonge imiphezulu yeetafile yeCorian okanye yequartz.
Ngelixa uninzi lwabayili beyolisayo inkangeleko kunye nokuziva ngathi kukuphikisana namatye endalo, njengegranite okanye imabhile, ayisebenzi xa kufikwa kwiikhawuntari ezisetyenziswa njengeendawo zokusebenzela- ezinje ngee-countertops zekhitshi okanye zangasese.
Ilizwe utata wentombi iingoma zomdaniso womtshato
Kutshanje, zimbini iintlobo zemathiriyeli eyenziweyo okanye eyenziwe ngabantu yokuphamba ethe yanda ngokuthandwa, ezi ziindawo zokubala zeCorian kunye nequartz.
Uyilo lweCorian vs Quartz Countertops
Ukuqina kweCorian vs Quartz
ICorian vs Quartz yesondlo
Iindleko zeCorian vs Quartz Countertops
Ngaba iQuartz okanye iCorian ingcono?
ICorian vs Quartz Infographic
Zombini iCorian kunye Imiphezulu yeetafile zekartz baxabisiwe ngenxa yokukwazi kwabo ukulinganisa ukujonga kunye nokuziva kwelitye lendalo. Zinomtsalane, zihlala ixesha elide, kwaye ezinye iindleko zibiza ngakumbi kunelitye lendalo.
I-Corian kunye ne-quartz zenziwe ngabantu okanye zenziwe, zenziwe ngumxube othile wezinto zendalo kunye nezinto zokwenziwa.
Ngelixa i-quartz ifunyenwe njenge-crystalline yamaminerali yendalo, imiphezulu yeetafile zokwenza i-quartz zihlala zenziwe ngomxube wezimbiwa kunye nentlaka, idayi kunye nezinye ezimbalwa. Imiphezulu yeetafile zeQuartz zikwabizwa ngokuba lilitye lobunjineli.
ICorian ligama lophawu lwenqaku le- imiphezulu yeetafile umphezulu Izinto ezenziwe yiDuPont. Ngumxube wee-acrylate polymers kunye nealuminium hayidroksayidi edityaniswe zii-resins kunye nemibala ngokudityaniswa kwee-pigment.
Ngelixa iDuPont yayingumvelisi wokuqala weCorian kwaye isaziwa ngezixhobo, ilungelo lomenzi likaCorian liphelile kwaye unokufumana izinto ezifanayo ezenziwe kwabanye abavelisi. Izinto zeCorian ezingasuki eDuPont zihlala zibizwa ngokuba ziindawo eziqinileyo.
Zombini ii-countertops zeCorian kunye ne-quartz zazenzelwe ukulinganisa ukubonakala kunye nokuziva kwamatye endalo ngelixa kushenxiswa enye yezona zinto ziphazamisayo kwilitye lendalo- imiphezulu yazo.
zithetha ntoni iimpahla zokunxiba
I-Corian kunye ne-quartz yindawo engena-porous, oku kuthetha ukuba abanazo ii-microscopic pores ezifumaneka kumatye endalo. Ngenxa yokuba ayinayo i-porous, kulula ukuyicoca kunye nokucoceka ngakumbi, okubaluleke kakhulu xa ukhangela izinto zokubala ekhitshini kunye neendawo zokuhlambela.
I-Corian kunye ne-quartz zinganyangeki ngakumbi kunelitye lendalo kunye nezinye izinto ezinokungena. Xa ulwelo ludibana nomphezulu ongena ngaphakathi lunokungena ngaphantsi komhlaba kwaye lukhokelele ekungcoliseni okanye ekujikeni umbala kwezinto.
Amachiza anokuphinda abe yindawo yokuzalisela iintsholongwane kwaye avumele ukuba ukungunda kunye nokuvunda kukhule kumphezulu wezinto. Kungenxa yoko le nto imiphezulu ye-Corian kunye ne-quartz engananyibiliki ithathwa njengeyona ndlela yococeko.
Xa kuziwa kwiCorian, esinye sezizathu zokuba abanye abantu bayikhethe ngaphezu kwe-quartz yimbonakalo yeCorian engenamthungo. I-Corian isebenzisa i-adhesive bonding eyenza i-seam engabonakaliyo.
Ngama-countertops e-quartz, i-seams igutyungelwe kwaye ngelixa ingabonakali, ayibonakali kangako kuneemigangatho yaseCorian.
umsesane wesithembiso uyaqhubeka ngomnwe mni
Abanye abantu bakwajonga njengeCorian izinto ezilula ukusebenza nazo xa kuyilwa igumbi njengoko kulula ukwenza ngokwezifiso.
Ungacela umenzi ukuba abumbe okanye abumbe izinto ngokweenkcukacha zakho. Kukho imibala engaphezu kwe-100 yeCorian ekhoyo kwaye unokucela umbala kumvelisi.
IQuartz inzima kuneCorian, inobunzima obumalunga neepawundi eziyi-6.2 ngonyawo wesikwere se-12mm. ICorian imalunga nobukhulu obulinganayo kunye nobunzima buya kubunzima bujikeleze i-4.4 yeepawundi.
Ngenxa yoku, abantu abaninzi banoluvo lokuba i-quartz ijongeka yomelele kwaye iyinyani, ngakumbi ukuba sithetha nge-quartz eyenziwe yokulinganisa ilitye lendalo.
I-Quartz sesinye sezona zinto zinzima emhlabeni kwaye imiphezulu yeetafile zekartz zezinye zezinto zokubala ezihlala ixesha elide nezingapheliyo. Banqabile kakhulu ukumelana.
I-Quartz ikwanokumelana nobushushu ngakumbi kuneCorian. Ngelixa iCorian kufuneka ibambelele kumaqondo obushushu ajikeleze i-212 F, okanye amanzi abilayo, baya kuqala ukukhubazeka kumaqondo obushushu angama-250.
Ukuba uthatha isigqibo sokusebenzisa imiphezulu yeetafile zeCorian ekhitshini lakho, kufuneka uqiniseke ukuba awubeki iimbiza ezishushu okanye iipani ngqo kumphezulu. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba awusoze unqumle nantoni na ngokuthe ngqo okanye i-countertop yakho yasekhitshini yaseCorian njengoko inokubamba okanye ukuntywila umphezulu.
Ngenxa yokuba zombini iCorian kunye neQuartz zizinto ezingenayo i-porous, kulula ukuzicoca nokuzigcina. Ukuba uchithe nantoni na kwi-countertop eyenziwe ngenye yezi zinto, ukuba nje ayonakalisi, ungayisula ngaphandle kokonakalisa umphezulu.
Ngenxa yokuba ayinayo i-porous, nawe akufuneki ukuba ukhathazeke ngokutywina okanye ngokutywina kwakhona i-Corian okanye i-quartz countertop. Olu lolunye uncedo lokuba ezi zinto zimbini zinelitye lendalo.
Njengoko besesitshilo, iCorian yomelele kancinci kuneQuartz, kodwa oko akuthethi ukuba kunzima ukuyigcina. Ngelixa iCorian kulula ukuyikrwela kune-quartz, kulula ukuyilungisa okanye ukuyibuyisela. Ngokumane uyisanti kwaye ubhuqe umphezulu okrwitshiweyo, unokuzilungisa ngokwakho i-countertop yakho yeCorian.
Kuzo zombini iindidi zee-countertops, unokugcina ucoceko ngokusula nje rhoqo ngendwangu emanzi ethambileyo kunye nokucoca okungahambisiyo. Njengokuba besesitshilo, iintsholongwane, ukungunda, kunye nokungunda akukhuli ncam kwiCorian kunye nequartz ukuze ungakhathazeki ngokusebenzisa isicoci esichasene neebhaktiriya okanye esichasene nokubumba nesikhunta.
Ubungakanani bedayimani yekarati esandleni
Iindleko zeQuartz zingaphezulu nje kweCorian. Ixabiso lingahluka ngokuxhomekeka kwisitayile okanye umbala wezinto ozikhethayo.
Ngokubanzi, imiphezulu yeetafile yaseCorian iya kubiza malunga ne-40-140 yeedola ngeenyawo ukufaka isikwere. I-Quartz iya kubiza malunga ne- $ 50-120 ngeenyawo zenyawo ukufaka.
Ukuba eyona nto uyifunayo ziitafile ezibonakala ngokwenyani kwaye zivakalelwa njengelitye lendalo, iquartz ijongeke ibe yinyani kuneCorian.
ICorian inembonakalo entle kakhulu kwaye yangoku. Abanye abantu bayayithanda neCorian kuba yenziwe ngokulula, inokuthi yenziwe ngokwezifiso kwaye ibunjwe kwiimilo ezahlukeneyo. Umzekelo, unokuba ne-countertop yaseCorian ebunjiweyo ukuze ibe nokudakumba okwakhelwe ngaphakathi kwindawo yokuhlambela.
Ngenxa yokuba ihlala yomelele kancinci kwaye iyamelana nobushushu kuneCorian, iquartz isenokuba lolona khetho lubhetele xa ufaka imiphezulu yeetafile yasekhitshini.
Ngakumbi malunga nesi sihloko ndwendwela iphepha lethu malunga umphezulu oqinileyo vs i-quartz imiphezulu yeetafile .
amagumbi okulala emfusa kunye nesilivere
Ixabiso le-dj lomtshato
iikhabhathi zebhodi yamaso
izipho zodade wezomthetho
Oyena mama wezipho zomtshakazi